Hal Xidhaale: Kordhi oo Kor u Qaad Xusuustaada – Rasaasa News
Hadaad ku guulaysato furida halxidhaalahan waxaad heli doontaa qiimo lacageed oo dhan $100, waana dhab arintaas ee ha fududaysan. Hal xidhaalayaasha ayaa waxay ahaan doonaan kuwo ku saabsan taariikhda iyo murtida dhulka Somalida Ogadeeniya iyo Somalida guud ahaan.
Jawaabta waxaad ku soo dirtaa e:contact@rasaasa.com. Hadii ay jawaabtaadu sax noqoto, waa lagula soo xidhiidhi, waxaadna soo diridoontaa Bank Account, si laguugu soo diro boqolka dollar [$100] ee aad ku guulaysatay.
Hadaba, Su,aashu waxaa weeye, Ma taqaanaa labada dilaa iyo halka dabaqoodhiga ee degan dalka Australia iyo waliba halka dilaa iyo labada daboqoodhi ee degan dalka Ingriiska? Goorma ayaa la bixiyey erayga Daba-qodhiye?
Jawaabta lagaa rabaa waa magacyada sadexda dabaqoodhi iyo saddexda dilaa.
Eray bixin: macanaha dabaqoodhi = daba-qodhiye [waa ruux aan maskaxdiisa ku socon balse daba socda ruux kale, meesha uu ruuxaasi istaagana daba taagan ama meeshuu aadaba daba taagan ama Carran].